बच्चाको गुरु बनी उनीहरूको मन जित्नुस् « News of Nepal
बच्चाको गुरु बनी उनीहरूको मन जित्नुस्
भारतका प्रख्यात शिक्षाशास्त्री गिजुभाइले शिक्षकका रूपमा आफ्नो पूरा समय बालमैत्री शिक्षाकै लागि खर्चिए। गुजराती भाषाका यी शिक्षासेवीले आफ्नो अनुभव र प्रयोगबाट बालबालिकाका लागि उपयोगी शिक्षण विधिको परिकल्पना गरे।
बालबालिकाको सही विकासका लागि सही शैक्षिक वातावरणको कुरा उठाउँदै त्यसमै केन्द्रित रहेर उनले धेरै पुस्तक पनि लेखेका छन्।
पुस्तकहरूमार्फत उनले बालबालिकाको सार्थक सिकाइ र विकासका लागि घरको वातावरण महत्वपूर्ण हुनेमा अभिभावकको ध्यानाकर्षण गर्दै शिक्षकलाई समेत जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका छन्।
बालबालिकालाई कसरी हुर्काउने र कसरी शिक्षा दिने भन्ने उल्लेख गर्दै गिजुभाइले विभिन्न पुस्तकमार्फत औंल्याएका छन्।
आफैं गर्न दिनुस् बच्चालाई, आफैं काम गर्ने सोख हुन्छ। उसलाई रुमाल धुन दिनुस्।
उसलाई भाँडामा पानी भर्न दिनुस्। उसलाई फूल सजाउन दिनुस्। उसलाई कचौरा मस्काउन दिनुस्। उसलाई मटरकोसाको दाना निकाल्न दिनुस्। उसलाई खानेकुरा पस्किन दिनुस्। बच्चालाई सारा काम आफैं गर्न दिनुस्।
उसको आफ्नो मर्जीले गर्न दिनुस्। उसको आफ्नो ढंगले गर्न दिनुस्। पहिचान, हाम्रो आँखामा अमृत छ वा विष, हाम्रो बोलीमा मिठास छ या टर्रोपन, हाम्रो स्पर्शमा कोमलता छ वा कठोरता, हाम्रो मनमा शान्ति छ वा अशान्ति, हाम्रो मनमा आदर छ वा अनादर, बच्चा यी कुरा तुरुन्तै पत्ता लगाउँछन्।
बच्चा हामीलाई एकदम जानिसक्छन्। ‘दुश्मन सुत, नत्र अहिले बाबाजीले पक्रेर लैजान्छन्। खाऊ, नत्र चोरले लिएर जान्छ।
बाघ आयो, बाबाजी आए, पुलिस आयो, चुप लाग, नभए कोठामा बन्द गरेर राख्छु, पढ्न बस, नत्र पिट्छु, जो यसरी बच्चालाई डर देखाउँछन्, उनीहरू बच्चाहरूका दुश्मन हुन्।
यदि हामीले बच्चाहरूलाई आफ्नो घरमा उचित स्थान दियौं भने, हाम्रो पृथ्वीमा नै स्वर्गको सृष्टि हुन सक्छ। स्वर्ग बच्चाको सुखमा छ। स्वर्ग बच्चाको स्वास्थ्यमा छ। स्वर्ग बच्चाको प्रसन्नतामा छ। स्वर्ग बच्चाको निर्दोष मस्तीमा छ।
स्वर्ग बच्चाको गीत र गुनगुनाइमा छ। बच्चाको शरीर सानो छ, तर उसको आत्मा महान् छ। बच्चाको शरीर बढ्दो छ। बच्चाको शक्ति विकासशील छ। तर उसको आत्मा त पूर्ण छ।
हामी त्यो आत्मालाई सम्मान गरौं। आफ्नो गलत रीति र नीतिबाट हामी बच्चाहरूको शुद्ध आत्मालाई प्रदूषित नपारौं। जानी राखौं बच्चा सम्पूर्ण मनुष्य हो। बच्चामा बुद्धि छ, भावना छ, मन छ, आफ्नो बुझाइ छ। बच्चामा भाव र अभाव छ, रुचि र अरूचि छ।
हामी बच्चाका इच्छाहरू चिनौं। हामी बच्चाका भावनाहरूलाई सम्झौं। बच्चा अबोध र निर्दोष छ। आफ्नो अहंकारका कारण हामी बच्चालाई तिरस्कार नगरौं। आफ्नो अभिमानका कारण हामी बच्चाको अपमान नगरौं।
बच्चालाई आफैंले खानु छ, तपाईं उसलाई नख्वाउनुस्। बच्चालाई आफैं नुहाउनु छ, तपाईं उसलाई ननुहाइदिनुस्। बच्चालाई आफैं हिँड्नु छ, तपाईं उसको हात नसमात्नुस्। बच्चालाई आफैं गाउनु छ, तपाईं उसलाई गाउन नलगाउनुस्।
बच्चालाई आफैं खेल्नु छ, तपाईं उसको बीचमा नआउनुस्। किनकि बच्चा स्वावलम्बन चाहन्छ। यति पनि नगर्ने ?
गानाबजाना गर्ने ठाउँमा जान छोडेर बच्चालाई बगैंचामा लैजानुस्।
गफमा अल्झिनुको साटो बच्चालाई चिडियाखाना देखाउन लैजानुस्। अखबारमा मात्र अलमलिएर नबसी बच्चाको कुरा पनि सुन्नुस्। राति सुत्ने समयमा बच्चालाई असल कहानीहरू सुनाउनुस्। बच्चाको हरेक काममा गहिरो चासो देखाउनुस्।
बच्चालाई यस कारण सम्मान गर्नुस, ताकि हामीमा आत्मसम्मानको भावना जागोस्। बच्चालाई गाली गर्ने, तर्साउने नगर्नुस्, जसले गर्दा गाली गर्ने र तर्साउने हाम्रो खराब बानी छुट्दै जाओस्।
बच्चालाई नपिट्नुस्, जसले गर्दा मारपिट गर्ने हाम्रो पशुवृत्ति नष्ट हुन सकोस्। यसरी आफूलाई सुधारेर नै हामी आफ्ना बच्चालाई सही रूपमा विकास गर्न सक्छौं।
बुवा र शिक्षकले बुझिराख्नुस्। पिटेर वा लोभ देखाएर बच्चा सुन्न सक्दैनन्, बरु उल्टै बिग्रिँदै जान्छन्। पिटेपछि बच्चामा झन् उग्र भावना बढ्छ। लोभ देखाउँदा बच्चा लालची बन्छन्। डर र लोभका कारण बच्चा निर्लज्ज, थेत्तरो, जिद्दी बन्छन्।
यदि आमाबुबाले आफूले जस्तोसुकै आचरण गरे पनि आफ्नो बच्चालाई संस्कारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्छन् भने, त्यो ठूलो भूल हो।
आमाबुबा र घर, दुइटै संसारको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली चिजहरू हुन्। घरमा बिग्रेको बच्चालाई भगवान् पनि सुधार्न सक्दैनन्।
प्रकृतिबाट टाढा रहने बच्चाले प्रकृतिको विविधताबारे कसरी थाहा पाओस्। झलमल्ल चन्द्रमा, कलकल बग्ने नदी, खेतको माटो, परालको घर, पहाडको ढुंगा, आकाशको रंग र खुला हावा, यी सबै ती उपहार हुन्, जुन बच्चालाई प्रकृतिबाट प्राप्त भएका हुन्।
बच्चालाई मन लागुन्जेल प्रकृतिको आनन्द लुट्न दिनुस्। बच्चा पल–पलमा बढ्ने प्राणी हो। बच्चाको दृष्टि हरसमय प्रश्न सोध्ने खालको हुन्छ। बालकको हृदय केही बोलिरहने खालको हुन्छ।
बच्चाको व्याकरणमा प्रश्न र बोली हुन्छ। तर पूर्णविराम कतै पनि हुँदैन। बच्चाको अर्थ हो, निरन्तर गति, जहाँ अल्पविरामसमेत हुँदैन।
आमाबुबा र अरू ठूला मान्छेको झगडाको कारण घरको वातावरण प्रायः अशान्त रहने गर्छ। यसले गर्दा बच्चा निकै दिक्क हुने गर्छन्।
अरू केहीका लागि नभए पनि आफ्नो बच्चाका लागि भए पनि हामी घरमा मिजासिलो रूपमा जीवन जिउन सिकौं। घरको शान्त र सुखी वातावरणमा नै बच्चाले राम्रो शिक्षा पाउन सक्छ। जो पुस्तक पढेर ज्ञान प्राप्त गर्छन्, उनीहरू शिक्षक बन्छन्।
जो बच्चालाई पढेर ज्ञान प्राप्त गर्छन्, उनीहरू शिक्षाशास्त्री बन्छन्। शिक्षाशास्त्रीको लागि प्रत्येक बच्चा एक सामथ्र्य, अद्वितीय र जीवित ग्रन्थ हुन्। तपाईं सारा संसारलाई धोका दिन सक्नुहुन्छ तर आफ्ना बच्चालाई धोका दिन सक्नुहुन्न।
तपाईं सबैलाई मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्छ तर आफ्ना बच्चालाई कहिल्यै मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्न। तपाईं सबैलाई सबथोक लुकाउन सक्नुहुन्छ तर आफ्ना बच्चालाई केही पनि लुकाउन सक्नुहुन्न।
बच्चा सर्वज्ञ हुन्छन्, सर्वव्यापी हुन्छन्, सर्वशक्तिमान् हुन्छन्। गफ दिनु बेकार छ हामीले। पढ्ने, सोच्ने र लेख्ने काम गर्दैमा हाम्रो काम पूरा हुन्छ त ? हुँदैन।
हामीले त शिक्षाको नयाँ–नयाँ मन्दिरको निर्माण गर्नु छ र ती मन्दिरमा अहिलेसम्म अपुज्य रहेकी सरस्वती देवीको स्थापना गर्नु छ। बच्चाहरूको लागि नयाँ युगको आरम्भ भएको छ। केवल गफ गरेर केही पनि हुँदैन। केही गर्नुस्।
केही गराउनुस्। जबसम्म बच्चाले घरमा पिटाइ खान्छ र विद्यालयमा गाली सुन्छ, तबसम्म बच्चा उर्ग बन्दछ। जबसम्म बच्चाका लागि विद्यालय, पुस्तकालय, बगैंचा र खेलमैदान बन्दैन, तबसम्म उनीहरूलाई स्वतन्त्र छाड्नुको विकल्प छैन।
जबसम्म बच्चाहरूलाई प्रेम र सम्मान मिल्दैन, तब बच्चाहरूले अरूलाई प्रेम कसरी बाँड्न सक्छन् ? बच्चाहरूलाई सिकाउने क्रममा मैले पनि धेरै सिकें। बच्चाहरूलाई पढाउने क्रममा मैले पनि निकै पढें। बच्चाहरूको गुरु बनेर मैले उनीहरूको मन जितेको छु।
– उत्तम डंगोल, नारनटार, काठमाडौं।